Aqalka Wakiilada Maraykanka Oo Baadhaya Musuq Lagu Eedeeyey Madaxweyne Trump | Sanaagmedia — Warar Sugan
Aqalka Wakiilada Maraykanka Oo Baadhaya Musuq Lagu Eedeeyey Madaxweyne Trump
March 4, 2019 - Written by admin
guddi hoosaadyada] Aqalka Wakiilada ee Maraykanka ayaa baadi goobaysa waraaqo muujinaya musuq maasuq, horjoogsi caddaaladeed iyo ku takri fal awoodeed oo la sheegay in ay ku kaceen Madaxweyne Donald Trump iyo kaaliyeyaashiisu.
Gudoomiyaha gudida caddaaladda, Jerrold Nadler, ayaa BBC-da u sheegay in 60 qof iyo shirkado ay u diri doonaan codsiyo Isniinta.
Nadler ayaa sheegay inuu rumaysanyahay in Trump hor joogsaday caddaaladda, laakiin in lagu oogo xil ka xayuubin iyo in kale waxa ay ku xidhantahay natiijada ka soo baxda baadhitaankaa.
Madaxweyne Trump ayaa si joogto ah u beeniya inuu wax khalad ah ku kacay waxaanu xisbiga Dimuqraadiga ku eedeeyey in ay isaga faquuqayaan.
Sabtidii ayuu aad u weeraray qareenkiisii gaarka ahaa Robert Mueller oo uu ku dhaliilay baadhitaanka uu hormuudka u yahay ee lagu hayo gacansaarka la sheegay in ay lahaayeen Ruushka iyo ololihiisii doorashadu.
Mueller, ayaa la filayaa in uu warbixinta baadhitaankii uu waday dhawaan u gudbiyo xeer ilaaliyaha guud.
Dhaleecaynta is daba joogga ah ee uu ku hayo Mueller iyo sidoo kale erigii uu shaqada kaga fadhiisiyey madaxii hore ee FBI-da ee baadhayey farogelinta Ruushka, ayuu sheegay Nadler in ay ka mid yihiin arimaha “tilmaamaya” in Madaxweyne Trump hor joogsaday caddaaladda
Hase yeeshee xildhibaankaa ka tirsan Dimuqraadigu wuxu yidhi “weli caddayn ma hayno” aanu ku bilowno dacwad xil ka xayuubin ah oo Madaxweynaha aanu ku qaadno.
“Xil ka xayuubintu wax sahlan ma aha, haatanna cadaymo weli ma hayno laakiin waxaanu bilaabaynaa baadhitaan dhab ah” ayuu Nadler ku yidhi wargeyska This Week oo uu la hadlay.
“berito [Isniinta] ayaanu codsiyo aanu qoraaladaa ku dalbanaynu u diri doonaa lixdan qof oo kala duwan oo ka shaqeeya Aqalka Cad iyo Wasaaradda Caddaaladda” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Dadka gudidu codsiyada u diri doonto wax aka mid ah wiilka uu dhalay madaxweynuhu ee Donald Trump Junior.
Xisbiga Dimuqraadiga ayaa haatan haysta aqlabiyadda Aqalka Wakiilada hase yeeshee Jamhuuriguna waxay haystaan aqlabiyada Senate-ka.